Waxyeelada kusoo wajahan Muruqmaalka Dekeda Muqdisho « AYAAMO TV
Waxyeelada kusoo wajahan Muruqmaalka Dekeda Muqdisho
606 Views Date March 19th, 2014 time 7:11 am
Xiisad iyo is fahmi-waa ayaa maalmahan dambe waxay ka taagan tahay qaabka shaqo ee Dekada Magaalada Muqdisho kadib markii la sheegay inay gacanta DF Somaliya ka baxday.
Xog ay Toosiye Online helayso ayaa waxay sheegaysaa in Shirkada Favori ee Turkiga ka diin-waan gishan ay la wareegtay maamulka dekada Magaalada Muqdisho waxaana khilaaf xoogan uu ka dhaxeeyaa Muruq maalka dekada iyo Maamulka shirkadaasi.
Ilo wareedka aan helayno ayaa sheegaya inay Shirkada Favori wado qorshe gebi ahaanba looga takhluusayo xamaalatada Somaliyeed ee Dekada ka howlgala taasi badalkeedana ay keenayaan Turki shaqaale noqota oo rarka soo dajiya maraakiibta iyo doomahana saara.
Warqado ayaa maalin ka hor lagu soo dhajiyey irida Dekada Muqdisho oo shaqaalaha Somaliyeed ee Muruq maalka ahaa lagu wargelinayey inay shaqooyin kale raadsadaan maadama aysan Shirkada Favori ogolaan doonin xamaalato Somaliyeed oo Dekadaasi ka howlgala waxaana taasi ay keentay buuq iyo dacwado loo gudbiyey Madaxweynaha Somaliya.
Isweydiinta kale ee guuxa iyo qeylo dhaanta dhalisay ayaa ahayd in Favori ku wargelisay ganacsatada Somaliyeed inay xafiis Dekada Muqdisho ka furi doonaan oo qofka uu qori doono inta tan ee loo soo qaadayo iyagana ay Turkiga kasoo daabulayaan wixii ay ganacsatada Somaliyeed dalbadaan halka markii hore ganacsatada iyo maraakiibta dadka soo kireysta ay wada xaajoon jireen.
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya inay khilaaf xoogan soo kala dhex galay Dawlada Somaliya iyo Dawlada Turkiga markii Wasiirka Dekadaha iyo Gaadiidka Badda ee Xukuumadda Soomaaliya Mudane Yuusuf Macalin Amiin Baadiyow uu ka carooday arintan ay Favori sameysay kadibna warqad dacwo ah uqoray madaxweynaha xiisadii ka dhalatayna weli la dareemayo.